FILOHAM-PIRENENA : Niraradraraka indray ny fandokafan-tena ho nahavita be tetsy Anosy
Maro amin’ireo antoko politika no nilaza fa tokony hajanona amin’izay ny fitokanana fotodrafitrasa hoentina hanangonana olona amin’izao fotoana an-katoky ny fanatanterahana ny fifidianana izao, mba hisorohana amin’ny mety hisian’ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana. 8 mars 2018
Hita taratra anefa fa manao izay ho afany tanteraka ny fitondram-panjakana ary manala vonkina amin’ny fanokanana fotodrafitrasa hoentina hisehosehoana etsy sy eroa. Omaly maraina dia nanatanteraka fitokanana fotodrafitrasa, zaridaina sy toeram-pialamboly etsy Anosy-Mahamasina ny Filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Niraradraraka indray ny fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana noentina hambaboana ny fon’ny vahoakan’Antananarivo.
Fotodrafitrasa tsy mitondra voka-tsoa ho an’ny vahoaka no ilàm-boninahitra
“Andrasantsika an’iza ny fanatsarana ny tanànan’Antananarivo ? “, hoy ny Filoha teny Anosy. Teny izay miantefa manokana ho amin’ny vahoaka izay toa midika fa ny fitondrana Hvm no tena nahavita be eto Antananarivo sy nahavita nampandroso azy. Raha ny zava-bita hita maso ankehitriny anefa no jerena dia anisany tena fotodrafitrasa nivaingana sy tsara indrindra ny nahavitan’ny lapan’ny tanàna manara-penitra sy mijoalajoala eo ampovoan’Analakely, ireo kianja fialamboly eny Antsonjombe sy Andohatapenaka ary ny toeram-ponenan’ny mpianatra eny Ankatso ary ny hopitaly goavana , izay fotodrafitrasa goavana misy akony mivantana ary mifanaraka amin’ny filàn’ny mponina nataon’ny filohan’ny tetezamita Andry Rajoelina. Fanatsarana ny tanàna tahaka izao, hoy izy nanampy azy, no andrasana amin’ny mpitondra.
Ny kabary no miraradraraka fa tsy mitondra vahaolana ho an’ny olana sedrain’ny mponina izay zava-bita, nefa dia anaovana lanonana goavana andaniam-bola fa tsy mbola hita izay famahana olana amin’izay fijalian’ny vahoaka izao. Ny filàna dera sy voninahitra amin’ireo vahiny no maha maika ny Filoha raiamandrein’ny vahoaka Malagasy fa tsy mba ahitana fanetren-tena hiombona amin’ny vahoaka mitrongy vao homana. Ankoatr’izay, fanakihanana noentin’ireo mpanara-baovao ihany koa ny mahakasika ny fankalazana ny andron’ny 8 marsa izay niteraka resabe fa lasa misy ambadika politika, ataon’ny fitondrana hanerana ireo mpampianatra mba hanohana sy hifidy ny antoko Hvm.